अकस्मात यी मन्त्रीले दिए राजीनामा, शंकर पोखरेललाई झड्का ! - दैनिकी मिडिया
अकस्मात यी मन्त्रीले दिए राजीनामा, शंकर पोखरेललाई झड्का !
काठमाडौं – सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वरूप मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आज बुधबार छलफल हुने निश्चित भएपछि सरकारका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्री पाण्डेयको राजीनामा सँगै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ठूलो झड्का लागेको छ । यसअघि पाण्डेयले संकटका बेला पोखरेललाई सघाउँदै आएका थिए ।
सिद्धान्तको राजनीति गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नैतिकताको आधारमा सरकारबाट फिर्ता हुनु उपयुक्त ठानेको र जसपाले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको पाण्डेयले जनाएका छन् । पाण्डेय जसपाबाट निर्वाचित सांसद थिए, उनलाई पार्टीले कारवाही समेत गरेको छ ।
गत बैशाखमा मन्त्री बनेका पाण्डेयसहित विजय यादव र कल्पना पाण्डेयलाई जसपाले सरकारबाट फिर्ता हुन नमानेपछि कारबाही गर्दै सांसदबाट पदमुक्त गरेको छ । पार्टीले कारवाही गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेपनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३(१) बाट निर्वाचित विजयी पाण्डेयले मन्त्री पद त्यागे पनि विजय यादव र कल्पना पाण्डेय सरकारमा कायमै रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपाका ६ सांसद रहेपनि पार्टीले ३ जनालाई कारबाही गरेपछि अब ३ सांसद मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
अछामका बाढिपिडितले क्षेतिपुर्तिको लागि अझै कति वर्ष कुर्ने सरकार ?